Petro de amanneɛbɔ kɔmaa asomafo no (1-18)
Barnaba ne Saul kɔɔ Antiokia a ɛwɔ Siria (19-26)
Bere a edi kan a wɔfrɛɛ asuafo no Kristofo (26)
Agabo hyɛɛ nkɔm sɛ ɔkɔm bɛba (27-30)
11 Na asomafo no ne anuanom a wɔwɔ Yudea no tee sɛ amanaman mufo nso agye Onyankopɔn asɛm no. 2 Enti bere a Petro foro baa Yerusalem no, wɔn a wɔka sɛ nkurɔfo ntwa twetia*+ no fii ase kasa tiaa no.* 3 Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Woakɔ nnipa a wontwaa wɔn twetia* fi ne wɔn akodidi.” 4 Ɛnna Petro fii ase kyerɛkyerɛɛ asɛm no mu nyinaa kyerɛɛ wɔn. Ɔkae sɛ: 5 “Ná mewɔ Yopa kurow mu rebɔ mpae, ɛnna minyaa anisoadehu bi. Mihui sɛ biribi* resian fi soro te sɛ ntama* kɛse bi a wokurakura anoano anan regyaagyaa mu fi soro, na ɛbaa me nkyɛn.+ 6 Bere a mehwɛɛ mu yiye no, mihuu asaase so mmoa a wɔn nan yɛ anan ne nkekaboa ne awɔ ne nketew* ne ewim nnomaa. 7 Metee nso sɛ ɛnne bi reka akyerɛ me sɛ: ‘Petro, sɔre, kum bi na di!’ 8 Ɛnna mekae sɛ: ‘Daabida, Awurade, efisɛ biribi a ɛho agu fĩ anaa ɛho ntew biara nkɔɔ m’anom da.’ 9 Ɛnne a efi soro no kae ne mprenu so sɛ: ‘Nneɛma a Onyankopɔn atew ho no, nka sɛ ɛho agu fĩ.’ 10 Eyi kɔɔ so mprɛnsa, na wɔtwee biribiara san kɔɔ ɔsoro. 11 Afei nso, saa bere no ara, mmarima baasa begyinaa ofi a yɛte mu no ano. Ná wɔasoma wɔn fi Kaesarea sɛ wɔmmra me nkyɛn.+ 12 Ɛnna honhom no ka kyerɛɛ me sɛ me ne wɔn nkɔ, na memmma m’adwenem nnyɛ me naa koraa. Na anuanom baasia yi nso ne me kɔe, na yewuraa ɔbarima no fi. 13 “Ɔka kyerɛɛ yɛn sɛ ohuu ɔbɔfo sɛ ogyina ne fi reka sɛ: ‘Soma mmarima ma wɔnkɔ Yopa, na wɔnkɔfrɛ Simon a wɔfrɛ no Petro no mmra,+ 14 na ɔbɛkyerɛ wo nea wo ne wo fifo nyinaa yɛ a, mubenya nkwa.’ 15 Na bere a mifii ase sɛ merekasa no, honhom kronkron baa wɔn so sɛnea yɛn nso, ɛbaa yɛn so mfiase no.+ 16 Ɛnna mekaee asɛm a na Awurade taa ka no. Ná ɔka sɛ: ‘Yohane de, nsu na ɔde bɔɔ asu,+ na mo de, wɔde honhom kronkron bɛbɔ mo asu.’+ 17 Enti, akyɛde a Onyankopɔn de ma kwa a ɔde maa yɛn a yɛagye Awurade Yesu Kristo adi no, sɛ ɔde akyɛde koro no ara bi ama wɔn a, mene hena a metumi asiw Onyankopɔn kwan?”+ 18 Bere a wɔtee eyinom no, wɔne no antwe bio,* na wɔhyɛɛ Onyankopɔn anuonyam. Wɔkae sɛ: “Ɛnde na Onyankopɔn abue kwan ama amanaman mufo nso sɛ wɔnsakra wɔn adwene sɛnea ɛbɛyɛ a wobenya nkwa.”+ 19 Na asuafo a amanehunu a ɛbae wɔ Stefano wu akyi nti wɔbɔ hwetee no,+ wɔkɔe ara kɔfaa Foinike ne Kipro ne Antiokia. Nanso Yudafo nko ara na wɔkaa asɛm no kyerɛɛ wɔn.+ 20 Nso wɔn mu bi a wofi Kipro ne Kirene baa Antiokia, na wofii ase ne wɔn a wɔka Greek kasa no kasae, na wɔkaa Awurade Yesu ho asɛmpa kyerɛɛ wɔn. 21 Bio nso, na Yehowa* nsa ka wɔn ho, na nnipa pii bɛyɛɛ gyidifo, na wɔdan baa Awurade nkyɛn.+ 22 Na asafo a ɛwɔ Yerusalem no tee wɔn ho asɛm, na wɔsomaa Barnaba+ ma ɔkɔe ara koduu Antiokia. 23 Bere a oduu hɔ a ohuu Onyankopɔn adom no, odii ahurusi, na ofii ase hyɛɛ wɔn nyinaa nkuran sɛ wɔnkɔ so mfi wɔn koma nyinaa mu ntie Awurade.*+ 24 Ná Barnaba yɛ onipa pa, na na honhom kronkron ne gyidi ayɛ no ma. Ɛno nti, nnipadɔm bebree begyee Awurade dii.*+ 25 Enti ɔkɔɔ Tarso kɔhwehwɛɛ Saul denneennen.+ 26 Bere a ohuu no no, ɔde no baa Antiokia. Na wɔde afe mua ne wɔn hyiaam wɔ asafo no mu, na wɔkyerɛkyerɛɛ nnipadɔm pii. Na Antiokia na wɔnam Onyankopɔn akwankyerɛ so dii kan frɛɛ asuafo no* Kristofo.+ 27 Saa nna no mu no, adiyifo+ bi fi* Yerusalem baa Antiokia. 28 Ɛnna adiyifo no baako a wɔfrɛ no Agabo+ sɔree, na ɔnam honhom no so hyɛɛ nkɔm sɛ ɔkɔm kɛse bi reba asaase nyinaa so.+ Na ampa ara, ɛbaa mu wɔ Klaudio bere so. 29 Enti asuafo no yɛɛ adwene sɛ, nea obiara betumi biara,+ ɔde bɛba ama wɔde akɔboa*+ anuanom a wɔwɔ Yudea no. 30 Enti wɔyɛɛ saa, na wɔde somaa Barnaba ne Saul+ ma wɔde* kɔmaa mpanyimfo no.
^ Anaa “wɔn a wɔtaa twetiatwa akyi.”
^ Anaa “ne no nyaa akasakasa.”
^ Anaa “wontwaa wɔn dua.”
^ Anaa “nwera.”
^ Nt., “wɔyɛɛ dinn.”
^ Anaa “wonsi wɔn adwene pi na wɔmmata Awurade ho.”
^ Anaa “bɛkaa Awurade ho.”
^ Anaa “wodii kan too asuafo no din sɛ.”
^ Anaa “sian fii.”
^ Anaa “wɔde akɔsom.”
^ Anaa “wɔde faa Barnaba ne Saul nsa so.”